I-CCleaner itshintsha ubunini kwaye ibe yinxalenye ye-Avast | Iindaba zeGajethi
Kwiminyaka yakutshanje sibonile ukuba iinkampani zesoftware entsha zifumene njani indawo ebalulekileyo kwintengiso. Kwelinye icala sifumana i-Avast kunye ne-AVG njengezinye iindlela eNorton, Panda, McAfee nabanye. Kodwa sikwafumana izicelo ezisivumela ukuba sicoce ikhompyuter yethu. Phakathi kwenani elikhulu lezicelo eziye zakhukhula kwimarike, ekuphela kwento ebalaseleyo ngaphandle kwayo yonke ibiyiCCLeaner, ukuba sisalathiso kungekuphela kwihlabathi lekhompyuter kodwa nakwinkqubo yezendalo ehambayo, ubuncinci kwi-Android, kuba olu hlobo lwesicelo alunandawo.
Ngaphezulu nje konyaka ophelileyo, imbonakalo yamagqala antivirus ancipha emva kUkufunyanwa kwe-XNUMX ye-AVG ngu-Avast. Kwakhona abafana baseAvast, ababesele benesicelo sokucoca ikhompyuter yethu, bayikhuphile incwadi yokutshekisha kwaye bathenga i-CCleaner, ingeyiyo yonke inkampani ephuhlise isicelo, kodwa esi sicelo sisemagqabini.
Le ntshukumo, njengaleyo yonyaka ophelileyo, ibonakala ijolise ekunciphiseni okanye endaweni yoko ukuphelisa ukhuphiswano yale nkampani kuwo omabini la macandelo, into abasemagunyeni baseYurophu abangazange bathande ukuyithanda.
Ngokwengxelo ezithe zaqinisekiswa iindaba, isicelo siza kuqhubeka nokusebenza njengangaphambili, ekuphela kwento etshintsha yinkampani esemva kwayo, isuka ekubeni yiPiriform iye eAvast.
Izicwangciso zexesha elizayo zika-Avast mhlawumbi baya kudibanisa le nkonzo ngaphakathi kwe-antivirus ukubonelela ngesisombululo esigqibeleleyo sekhompyuter, kodwa okwangoku akukho lwazi lungako malunga nayo kwaye konke esinokukwenza malunga nokuqikelela. Ukuba iinjongo zika-Avast ngeCCleaner zizalisekisiwe, siya kuba nakho ukuyithemba kwimihla yethu ukuze ihlale igcina iPC kunye neMac zicocekile, ukucima usetyenziso, ukucoca inkunkuma ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » I-CCleaner itshintsha ubunini kwaye ibe yinxalenye ye-Avast